Fisorohana fahatapahan-jiro :: Nampiakarin’ny Jirama ny herinaratra amin’ny faritra maro • AoRaha
Fisorohana fahatapahan-jiro Nampiakarin’ny Jirama ny herinaratra amin’ny faritra maro
Nandray fepetra mano­kana ny orinasa Jirama noho ny antony ara-teknika, indrindra mandritra izao fiatrehan’i Madagasikara ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, amin’ny lalao baolina kitra na ny CAN 2019 izao. Nampiakarin’izy ireo ny tanjaky ny herinaratra amin’ ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina mba hisorohana ny fahata­pahan-jiro.
Taorian’ny teny Ambodivona mankeny Ambohima­nandray, Ambohimanarina dia isany nampiakarina ihany koa ny eny Sabotsy Namehana, Anosibe, Namontana, Ambohibao, Faralaza, Analamahitsy, Antanetibe Ivato ary Ambatolampy, nanomboka omaly.
« Mitombo ny filàn’ny mponina ka miteraka fahatapahan-jiro matetika izany. Betsaka noho izany ireo mpitsinjara herinaratra no tsy mahazaka intsony ka nisy nirehitra ireo andrin-jiro », raha ny fanazavana avy eo anivon’ny Jirama.
Manoloana ity tsy faha­zakan’ny herinaratra ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa amin’ny mpanjifa ny Jirama mba tsy hampiasa fitaovana mandeha amin’ny herinaratra mahery be ary mba tsy miaraka alefa daholo ny fitaovana mandeha amin’ny herinaratra rehetra.
Mahakasika ny fahatapahan-jiro tamin’ny faritra Atsimon’Antananarivo toy ny teny Anosizato, Ampitatafika, Tsimbazaza, Andohan’
i Mandroseza, Anosipatrana, Andavamamba, Anosy, 67Ha hatrany Andohantapenaka kosa dia nisy ny fahatapahana taribin-jiro teo amin’ny tambajotra mitondra herinaratra mahery vaika avy eny Ambohimanambola, izay mamatsy ireo faritra ireo. Efa miverina amin’ny laoniny ny famatsiana herinaratra amin’ ireo faritra ireo ankehitriny.
Olana amin’ny fo :: Mety hitarika fahafatesana tampoka ny fihetseham-po be loatra
Toetrandro :: Hitohy ny zavona eto afovoan-tany amin’ity herinandro ity